Samsung Galaxy Rịba ama 5, anyị nyochaa ya na vidiyo | Gam akporosis
Samsung juru anyị anya site na ichere maka ngosi nke Samsung Galaxy Note 5. Onye nrụpụta Korea jiri ohere IFA Berlin mee ihe iji gosipụta ọhụụ ọhụụ nke phablets, mana oge a ọ bụghị otu ahụ: Samsung bu ụzọ webata Galaxy Note 5 iji tụọ mwepụta nke iPhone 6s na 6s Plus na ọkọ ole na ole ahịa ya isi osompi.
Anyị amaghị ma egwu ahụ ọ ga-agara nke ọma maka onye nrụpụta, mana anyị nwere ike ịkwado na Samsung Galaxy Note 5 bụ nnukwu ekwentị. Taa, anyị na-ewetara gị nyocha vidiyo nke ọhụụ ọhụrụ nke Samsung phablet nso ka ị hụ ihe nzuzo niile nke 5 Galaxy Note.
1 Ihe mara mma mara mma nke nwere oke elu
2 Nka na ụzụ e ji mara Samsung Galaxy Note 5
Ihe mara mma mara mma nke nwere oke elu
Dị ka a tụrụ anya, atụmatụ nke Samsung Galaxy Note 5 dị nnọọ ka nke Galaxy S6 / S6 ihu. Ihe ngwụcha ya dị mma: otu akụkụ nke nwere okpukpu abụọ Gorilla Glass 4 na oghere aluminom nke na-enye ya mmetụ ahụ kachasị adị anyị mma.
Hụ nyocha vidiyo anyị na-eme nke Samsung Galaxy Note 5, o doro anya na onye na-emepụta Korea etinyela anụ niile na igwe maka ngwaọrụ a iji jide ahịa: obi ụtọ na aka, siri ike na ọkụ.
Nka na ụzụ e ji mara Samsung Galaxy Note 5
Ibu ibu 171 grams
Ihe owuwu Aluminium na obi iko na okpukpu abụọ oyi akwa ozodimgba iko 4
Ihuenyo 5.7 sentimita asatọ na mkpebi 2560 x 1440 na 518 dpi
Nhazi Samsung Exynos 7420
Nchekwa n'ime 32GB // 64GB // 128GB
Oghere kaadị Micro SD Ee ihe ruru 200GB
Batrị 2.700 mAh
Ahịa 899 euro
A ihere na Samsung Galaxy Note 5 agaghị emesị-abata na Spain n'ihi na mmetụta nke hapụrụ anyị mgbe anyị nwara ya na IFA enweghị ike ịka mma. Anyị ga-ahụ etu Samsung Galaxy S6 ihu + si arụ ọrụ na Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy Rịba ama 5, anyị nyochaa ya na vidiyo
Ekele, enwere njehie na nkọwa nke Nkọwa 5. Enwere m Nkọwa 5 na ọ nweghị oghere micro SD yana ọ dịkwa na mbipute 128 GB, naanị 32 na 64 GB. Batrị ahụ bụ 3000mAh ma ọ bụghị 2700 mAh.
Niantic, Nintendo na Egwuregwu Freak jikọtara ọnụ iji wetara anyị egwuregwu augoro nke ọma Pokemon GO